Adeegyada Ilaalinta Hantida iyo La-tashiga
Ka ilaali hantida shaqsiyeed mas'uuliyadda ganacsiga, khilaafaadka lammaanaha ganacsiga, dacwadaha, xukunka iyo xitaa furitaanka. Waxaan kaa caawinaynaa sidii aad ganacsi u bilaabi lahayd, u kobcin lahayd meheraddaada una ilaalin lahayd waxa ugu muhiimsan, hantida aad shakhsiyaadka ku uruuriso guushaada.
Waxaan bixinaa adeegyo fara badan oo ilaalin hanti iyo gaadiid kuwaasoo ku bilowda aaladaha asturnaanta oo aad u aado illaa iyo qorshooyinka kalsoonida hantida guud ee xeebaha. Bilowga qorshe kasta oo lagu keydiyo hantida ayaa ah in la abuuro hay'ad sharci oo gaar ah oo ka ilaalisa hantidaada shakhsiga ah mas'uuliyadda.
Shirkadaha iyo LLCs waa qaabka ugu caansan ee ilaalinta hantida ka timaada mas'uuliyadda ganacsiga ee ka ilaalinaysa milkiilaha ganacsiyada hantidiisa shaqsiyeed deynta iyo mas'uuliyadda ganacsiga - indhashareerka shirkaddu waa lakabka koowaad ee ilaalinta hantida milkiilayaasha ganacsiga.
Qarsoodiga maaliyadeed iyo asturnaanta lahaanshaha waxay gacan ka geysaneysaa yareynta fursadaha lagu bartilmaansan karo dacwad sharci darro ah. Waxaan bixinaa adeegyo gaar ahaaneed ah markii aan sameyneyno ganacsi cusub barnaamij sanadeed ahaan iyo aaminaad dhul oo u oggolaanaya milkiileyaasha guryaha inay cinwaan uga dhigaan magaca aaminka. Asturnaanta lahaanshaha iyo badbaadinta shirkadaha dhexdooda waxay abuurtaa lakab adag oo ilaalin ah.
Waxaa jira dhowr nooc oo aaminaad ah oo ka ilaaliya hantida dacwadaha. Hanti ku uruurinta kalsoonida ujeedooyinka qorshaynta guryaha ayaa laga ilaaliyaa dacwadaha shaqsiyadeed ee ka dhanka ah ka faa'iideysteha aaminaada.
Shuruucda ugu adag ee ilaaliya hantidaada waxay ku yimaadaan qaab ficillo is aamin ah. Amaanada gaarka ah ee lagu ilaaliyo hantida ayaa si gaar ah loo abuuray si looga ilaaliyo hantida qofka masuuliyada mustaqbalka halkaas oo qofku labaduba degi karo kana faa iidi karo hantida kalsoonida.
Aaladahaani waa kuwo aad uqurux badan oo lagug heli karo Xukumadaha Gudaha iyo Dibadda. Waxaan khabiir ku nahay aasaasida gawaarida gaashaaman iyo aaladaha sharci ee loogu tala galay ilaalinta hantidaada shaqsiyeed.
Hay'adda Ilaalinta Hantida
Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee aad iskaga ilaalin karto dacwadaha waa adoo dejinaya aaminaada ilaalinta hantida. Nasiib darrose, aaminaadaha maxalliga ahi ma hayaan diiwaanno raad-raac oo wanaagsan. Kalsoonida laga leeyahay baddaha, dhinaca kale, waxay leeyihiin qaar ka mid ah taariikhda dacwadda ilaalinta hantida ugu wanaagsan. A Kalsoonida Aagga Cook iyo sidoo kale aaminida Nevis waxay leeyihiin labo ka mid ah diiwaanada ugu wanaagsan.
IRAs badanaa waa laga dhaafay ama qayb ahaan waa laga dhaafay dacwadaha. Si kastaba ha noqotee, ilaalintooda ayaa xadidan. Intaas waxaa sii dheer in IRA-da ilaalin karto furiin mooyee inaad isticmaasho qalabka ku habboon ee sharciga ah. Gudaha Ilaalinta Dacwadda IRA ee Gobolka, waad aqrin doontaa sida looga ilaaliyo IRA-da furitaanka ama dacwadaha.